Iyo Yemari Sarudzo, Kufona uye Kuisa, tsananguro yakadzama | Ehupfumi Zvemari
Zvemari Sarudzo, Fona uye Isa
Pakati pezvakasiyana zvigadzirwa zvemari tinowana Zvemari Sarudzo. Sarudzo zvibvumirano zvinotengeswa pakati pevatengi nevatengesi. Vanopa varidzi vavo mukana (asi kwete chisungo) kutenga kana kutengesa kuchengetedzeka pamutengo wakatarwa mune ramangwana. Kugona kushandisa kondirakiti iyi nekodzero hakuna mahara, nekuti dai zvirizvo, paizongova nemukana wekukunda kana kusarasikirwa. Kuti utenge chibvumirano ichi, unofanirwa kubhadhara izvo zvinonzi "premium" kumutengesi. Pane zvinopesana, kana iwe uri mutengesi, iwe unova unogashira iyi premium.
Sezvo Zvemari Sarudzo inoda ruzivo rwakakura rwehupfumi uye zvemari, izvo hazvisi chinhu chiri nyore kunzwisisa. Kune izvi, chinyorwa ichi chakagadzirirwa kutsanangura mashandiro e mashandiro avo uye zvazvinoreva kuva mutengi kana mutengesi weKufona kana Put. Zvakare njodzi dzakasiyana dzinosanganisirwa uye zvinobatsira sei nzira iyi inounza kuisa mari. Ndinovimba unozviwana zvichibatsira!
1 Chii chinonzi Sarudzo Yemari?
2 Chii chinonzi Call sarudzo?
2.1 Tenga Kufona
2.2 Tengesa Kudana
3 Chii chinonzi kuisa sarudzo?
3.1 Tenga Put
3.2 Tengesa Put
4 Ko kana iwe uchida kutengesa iyo sarudzo yemari isati yapera?
Chii chinonzi Sarudzo Yemari?
Sarudzo yezvemari chibvumirano chakamisikidzwa pakati pemapato maviri (mutengi nemutengesi) chinopa mutengi chibvumirano / sarudzo kodzero, asi kwete chisungo, kutenga (kana akatora Runhare) kana kutengesa (kana akatora Isa) pamutengo wakatemerwa mune ramangwana refa. Pane rimwe divi, mutengesi wechibvumirano / sarudzo ane chisungo chekutengesa kana kutenga pamutengo wainge wabvumiranwa pese panoda mutengi.
Ivo anoshandiswa zvakanyanya senzira dzekuvharira, kubvira vanoita semhando ye "inishuwarenzi". Kana varimi vakatenda kuti panogona kunge paine kamwe kamwe kufamba mumusika, mukana wekutenga sarudzo yemari uripo. Zvakare semukana wekubatsirika kubva nekukurumidza kufamba sezvo kurasikirwa kuri kushoma uye purofiti haina muganho (ini ndichataura nezve izvi gare gare).
Ndeipi misika yeramangwana?
Kuti ushandise kodzero iyi, mutengi anogara achibhadhara mutengesi mari yepamberi. Mutengesi wesarudzo yezvemari anogara achigamuchira mubhadharo wakabhadharwa nemutengi. Kubva apa, uye nemamwe mazwi, chibvumirano chakagadzwa. Chibvumirano ichi chinorevei kubato rega rega? Kuti tiite izvi, ngatione kuti ndeapi marudzi maviri esarudzo dzemari aripo, iyo Kufona uye iyo Put, uye kuti zvinorevei kuva mutengi kana mutengesi mune imwe neimwe nyaya.
Chii chinonzi Call sarudzo?
Kufona kunogona kudanwa zvakare Sarudzo yekutenga. Chibvumirano icho inokutendera iwe kuti utenge chinhu mune ramangwana pamutengo watove. Idzi sarudzo dzemari dzinogona kuve nezvakadzika masheya, indices, zvigadzirwa, mari yakatarwa ... Kune akasiyana siyana. Kufanana uye misiyano pakati peKudaidza nePuti sarudzo zviri mune chokwadi chekuti maCall anouya kuve kodzero dzekutenga uye iyo Put mvumo yekutengesa. Iko hakuna chisungo chekutenga pakukura (kunze kwemutengesi). Asi kuti tinzwisise zvirinani, ngatione kuti zvinorevei kushanda navo.
Mune sarudzo yekufona mutengi anogona kusarudza mutengo waanoda kutenga mune ramangwana. Zviripachena, isu tese tinoda kubhadhara izvo zvishoma zvirinani. Nezve izvo, pane chekutanga (mutengo uyo chibvumirano chakakodzera). Kana iwo mutengo waunoda kutenga uri pazasi pezvino rondedzero mutengo, iyo premium ichave inodhura. Uye iyo yakaderera mutengo, iyo inodhura iyo iyo premium (kazhinji yakaenzana). Naizvozvo, mitengo inowanzoiswa (uye ndicho chinhu chakajairika) chiri padyo padyo kana pamusoro pemutengo wakanyorwa. Nekuenderera mberi kwaunenge uri, zvichawedzera kuomera kuti quote isvike, uye nekudaro iyo yakachipa iyo premium ichave.
Muenzaniso wekutanga kana uchinge warasikirwa. Ngatimbofungidzirai kuti isu tinoda kutenga sarudzo pane kambani X iri kutengesa pa $ 20. Tinoda kutenga Call sarudzo ichipera mumwedzi mumwe uye tinosarudza kusarudza $ 50 tobhadhara mari inoita $ 21. Mushure memwedzi uno stock yakadzika zvakanyanya uye iri pamadhora gumi nemashanu. Mune ino kesi takasarudza kusatenga $ 1 (nekuti isu hatisi mapenzi kana). Kurasikirwa? Iyo premium yatinobhadhara, $ 1. (Makondirakiti anowanzo kuve zvikamu zana, saka mubhadharo uri $ 100 pachikamu chimwe nechimwe muchibvumirano. Kana paine zana, kurasikirwa kwacho kungave $ 1)
Muenzaniso wechipiri kana uchinge wakunda. Takatenga kufona kwedu pa $ 1 pakambani X. Sapakutanga, yakanyorwa pa $ 20 uye isu takaitenga nekodzero yekuvatenga kana tichida kusvika pa $ 50 (zvimwe chete). Isu tinoona kuti kambani iri kuramba ichikwira mumutengo, pakupedzisira pakukura iri pa $ 21. Chii chatinoita? Kodzero yekutenga ne $ 24 inoitwa uye sezvo musika uri pa $ 20, tinowana $ 21 pachikamu chimwe nechimwe chakatengwa. Ehezve, iyo haisi iyo yekupedzisira purofiti, iyo premium yakabhadharwa yaive $ 24, saka iwe unonyatso kuwana $ 20 pachikamu. Mune ino kesi mihoro inogona kuve isina muganho.
Kuve mutengesi weKufona pamwe nePuti kunoreva njodzi yakakwira zvakanyanya. Pano kurasikirwa hakuna kuganhurirwa, asi kunogona kusaganhurirwa. Kupesana nemutengi, iyo purofiti ishoma, nekuti izvo zvakawanikwa ndiyo yekutanga.
Kuva mutengesi kunoreva kuve unogashira mari yepamberi, uye une chisungo chekutengesa chero nguva mutengi paanenge achichida kana paanomukodzera. Kana Kufona kukatengeswa, nyaya ingangodaro ndeyekuti mutengo weiyo chinhu wakaenzana kana pasi pemutengo uyo iyo Put yakatengeswa (uye chengeta iyo yakazara premium). Mamiriro ezvinhu akaipisisa angave ekuti aseti ikwire zvakanyanya, saka painonyanya kukwira, mutengi anofanira kubhadharwa.
Chii chinonzi kuisa sarudzo?
A Put inogona zvakare kudaidzwa isa sarudzo. Chibvumirano icho inokutendera kuti utengese pfuma mune ramangwana nemutengo wakatarwa kare. Iyi midziyo inogona kunge yakaita Kudana, ndiko kuti, masheya, zvigadzirwa, indices ... Kune mhando imwechete.
Kusiyana neKufona, Isa sarudzo zvibvumirano zvinoratidza iwo mutengo unogona kutengeswa nenhumbi mune ramangwana. Mune ino kesi, iyo premium inobhadharwa, iyo yakakwira ichave sezvo isu tinosarudza yakakwira remangwana mutengo. Pane zvinopesana, iyo premium inoderera sezvo mutengo unoratidzwa muPuti wakaderera. Chekupedzisira, mukudzosera sarudzo dzekufona, une mvumo yekutengesa (asi kwete chisungo) kana iwe uri mutengi. Kana iwe uri mutengesi wechibvumirano chePuti, pane chisungo. Kuti tinzwisise zvirinani, ngatione mutsauko pakati pekuve mutengi kana kutengesa yemari Isa sarudzo.
Ngatimbofungidzirai kuti takatarisana nemamiriro ezvinhu atinofunga kuti iwo musika unogona kudzika zvakanyanya. Takasarudza kutenga imwe sarudzo paIbex-35. Iyo Ibex iri pamazana masere nemazana masere nemakumi mashanu, uye nhasi, unova Muvhuro, tasarudza kutenga Put sarudzo nekupera kupera kwesvondo nekodzero yekutengesa pa8150 kubhadhara mubhadharo we € 8100.
Zvinogona kuitika zviitiko zviviri, kuti pakupera mutengo uri pamusoro pe8100 kana pazasi.
Kana mutengo uri pamusoro pe8100. Isu hatiratidze kodzero yekutengesa, nekuti pamusoro peizvozvo isu tinofanirwa kutengesa zvakachipa kupfuura musika uri panguva iyoyo. Tinorasikirwa nemutengo, iyo € 60 uye ndizvozvo. Izvo Ndiyo kurasikirwa kukuru kwatinozvifumura pachedu.
Kana mutengo uri pazasi pe8100. Pakadaro, tinosarudza kushandisa kodzero yekutengesa ku8100. Iyo purofiti mutsauko pakati pe8100 nemutengo uri Ibex. Kana mutengo uri 7850 € 250 yawanikwa. Yakachena i € 190, sezvo mari yepamberi ichidhura 60 euros. Kuve mutengi wePuti kunotungamira ku mihoro inogona kunge isingagumi sekudonha kwemutengo yeiyo yepasi pfuma.
Kuva mutengesi wesarudzo yekuisa kunoreva kuwana iyo premium kumberi. Kuva mutengesi, une chisungo chekutengesa pamutengo wakabvumiranwa kana mutengi achishuvira pakukura.
Kana mutengo weaseti wakwira kupfuura uyo unowanikwa muchibvumirano, hapana dambudziko, hapana munhu anoda kushandisa kodzero yekutengesa yakachipa kana iyo aseti iri kudhura. Nekudaro, kana mutengo weasiti wadonha zvakanyanya, mutengi anogona kushandisa kodzero yekutengesa zvakanyanya kudhura. Iwe unofanirwa kungo rangarira iyo yapfuura kesi. Kana iyo Put yeIbex-35 yanga yatengeswa pa8100 uye ikavharwa vhiki pa7850, € 250 yaifanira kubhadharwa. Njodzi pano ndeyekuti iyo Ibex (kana chero zvazvingava) inogona kuwira zvakanyanya, saka kurasikirwa kweMutengesi wePuti (sekune Mutengesi wekufona) hakuna muganho.
Ko kana iwe uchida kutengesa iyo sarudzo yemari isati yapera?
Kana iwe uchida kutengesa kusati kwapera, iyo premium yauri kutengesera parizvino ichawanikwa kondirakiti yesarudzo yemari yatakatenga. Kana ikatengeswa nemutengo wepamusoro (premium), ichahwinhwa, uye kana iri yepasi, inorasika.
Iwo maprimiyamu anozove nekuchinja-chinja kudzamara kupera kwechibvumirano, zvinoenderana nezvinhu zviviri:
Sezvo kukura kunoswedera, maprimiyamu anodonha mukukosha. Izvi zvinokonzerwa nenyaya yekuti pfuma iri kashoma kuti itambure kuchinjika kamwe kamwe mumutengo wayo. Kukura kwemazuva maviri hakuna kufanana nekukura kwemwedzi yakati wandei.
Sezvo mutengo unofamba zvese zviri zviviri zvakaderera uye zvakaderera, maprimiyamu anokwira kumusoro kana pasi mukukosha. Izvi zvinoenderana nekuti ndeyeKufona here kana sarudzo yePuti. Panyaya yekufona, sezvo mutengo weiyo asset unokwira, ndozvinoitawo premium. Panyaya yaPuti, sezvo mutengo wefa iri unowira, mubhadharo unokwira. Uye zvinopesana kune ese ari maviri, maprimiyamu anoenda pasi kune maCall sezvo mutengo wefa iri unodzikira, kana mune iyo Put's iyo premium inodzikira sezvo mutengo weiyo asset unokwira.
Haasi ese mabroker kana masangano anotendera iwe kuti ushande pamwe nesarudzo dzemari nenzira imwechete nguva dzose. Izvo zvese zvinoenderana neshamwari dzavanadzo, mashandiro avanoita uye midziyo inomirirwa nesarudzo. Saizvozvo, imwe neimwe nhumbi inomiririrwa muchibvumirano zvakasiyana. Haasi ese mapoinzi emakotesheni ane kukosha kwakaenzana, imwe poindi yacho yakakosha zvakanyanya uye vamwe zvishoma kwazvo. Ita shuwa kuti iwe unonyatso ziva iyo huwandu uye mamiriro iwe auri kudyara!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Zvemari Sarudzo, Fona uye Isa
Ndinochinja sei kero yangu muSocial Security?